Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-asa ahụ nke China nwere otu ọrụ - Huanyu Sanitary Ware
Home > Ngwaahịa > Isi ịsa ahụ > Isi ịsa aka > Igwe ịsa aka otu arụrụ mara mma
Isi ụlọ ịsa ahụ na-agbanwe agbanwe
Ụlọ ịsa ahụ ejiri rụọ ọrụ ise
Igwe ịsa aka na-arụ ọrụ ise
ABS Plastic Igwe ịsa aka na-arụ ọrụ ise
Igwe ịsa aka otu arụrụ mara mma
Nke a na-acha otu ọrụ aka ịsa ahụ High mma transperent silica gel water outlet, na-enweta ahụmịhe ịsa ahụ dị mma, ọdịdị mara mma, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oroma dị, ihe plastik ABS ọhụrụ.
N'ogbe yi Otu arụrụ arụ ọrụ aka ịsa ahụ sitere na China
1.Product Okwu Mmalite
anyị na-enye chrome aka na-acha odo odo na-arụ ọrụ dị elu yana akwụkwọ ikike afọ 2. mmiri mmiri silicone na-akwado gburugburu ebe obibi. Anyị etinyela aka na ngwa ịsa ahụ maka ihe karịrị afọ 10, ndị ahịa anyị nọkwa na mpaghara dị iche iche nke ụwa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye mmekọ gị ogologo oge na China.
2.Product Parameter (Nkọwapụta)
Igwe ịsa aka na-arụ otu ọrụ mara mma
Dayameta nke ihu
Nrụgide arụ ọrụ
1.6 ± 0.05Mpa na 0.05 ± 0.01Mpa, debe 1 min, enweghị ntapu
Nnwale ịgba nnu acidâ‰¥24 ma ọ bụ awa 48
OEM & ODM anabatara
3.Product Njirimara Na Ngwa
Igwe ịsa ahụ na-arụ otu ọrụ mara mma, ọmarịcha ma na-agbanwe agbanwe, dabara maka ụdị ụlọ niile dabara adaba maka ụlọ ịsa ahụ ọ bụla, n'agbanyeghị n'ụlọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ chọrọ akụrụngwa ịsa ahụ.
Plastic ABS ọhụrụ, nke na-adịghị egbu egbu, ezigbo mgbochi iyi, oke okpomọkụ na-eguzogide, ezigbo mgbawa.
Ogwe igwe anaghị agba nchara na-apụ apụ maka nhicha dị mfe ma zere igbochi unyi.
1.Mode nke spraying
Ogo ọkọlọtọ mba ụwa nha G1/2.
5.Product ruru eru
Ọ bụrụ na ịchọrọ asambodo ndị ọzọ dị ka ACS, SASO, ETC., anyị nwere obi ụtọ ịnye gị enyemaka.
6.Napụta, Mbupu na-eje ozi
Anyị ga-ahọrọ ụzọ kacha mma dịka arịrịọ ndị ahịa si dị.
1. Site Ikuku, ruo ọdụ ụgbọ elu gosiri.
2. Site Express (FedEx, UPS, DHL, TNT, EMS), na adreesị e gosiri.
2. Site n'oké osimiri, ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri e gosipụtara.
Q. Kedu ụdị ụlọ ọrụ anyị bụ?
Anyị bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ma nwee ụlọ nrụpụta nke ya.
Ụlọ ọrụ anyị dị na Cixi, Ningbo, nke dị nso na Hangzhou Bay Cross-sea Bridge. Ọ ga-ewe otu elekere site na ụgbọ ala si Hangzhou, yana ụgbọ ala site na Shanghai 2 awa.
Q.Ị nwere ebubo na kedu ka i siri mesoo ha?
Ọ bụrụ na nsogbu si anyị dị otú ahụ designã€ soratchã€ leakage na ngwugwu, anyị ga-n'ọrụ zuru ezu.
Ọ bụrụ na nsogbu sitere na ụgbọ njem, anyị nwere ike ịnye mkpesa Fall Down Test, na-enyere aka n'ịzọrọ ụlọ ọrụ mbupu.
Ọ bụrụ na enwere ngwaahịa ndị nwere ntụpọ nwere obere nha, anyị ga-eziga maka dochie n'usoro na-esote dị ka foto ma ọ bụ vedio gị.
Q.Olee otú iji hụ na ngwaahịa dị mma?
Nkwa ihe eji eme ihe niile na-eji 757/707 plastic ABS ọhụrụ.
Nkwa dị n'elu: 100% nyocha iji zere ọkọcha ọ bụla, akwa akwa na-efu efu, mee ka ihicha elu na-enweghị ntụpọ ọ bụla.
Nkwa eji eme ihe: Nwalee n'okpuru nrụgide mmiri 0.5MPa, jide n'aka na isi ịsa ahụ ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na-enweghị nkwụsị ọ bụla.
Nkwa nchekwa: Jiri ABS dị mma na ihe rọba, iji zere mmetọ mmiri ọ bụla sitere na ihe ahụ
Ajụjụ gbasara Sample
Obi dị anyị ụtọ ịnye ndị ahịa ihe nlele n'efu, a na-anabatakwa obere nnwale nnwale, mana anyị nwere olile anya na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ụgbọ njem, yana enwere ike ebipụ ya ozugbo ị debere iwu ahụ.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ọka ịsa ahụ na-arụ otu otu nwere agba, ndị na-emepụta ihe, N'ogbe, China, ọnụ ahịa, ụlọ ọrụ, ndị na-ebunye ya
Biko Biko chere na ị ga-ajụ ajụjụ gị n'ụdị dị n'okpuru ebe a. Anyị ga-azaghachi gị na awa 24.
Ngwa ndị yiri ya
Igwe ịsa aka Electroplating nwere akụkụ abụọ
Electroplating gburugburu aka ịsa isi